मन्त्री यादवको प्रश्न : कांग्रेसले चाहिँ जनतालाई अर्गानिक खुवाएको थियो ?::Point Nepal
मन्त्री यादवको प्रश्न : कांग्रेसले चाहिँ जनतालाई अर्गानिक खुवाएको थियो ?
२७ असार, काठमाडौं । उद्योगमन्त्री मातृका यादवले कसैले नगरेको काम गर्न हिम्मत गर्दा आफूलाई ‘दलाल’को बिल्ला भिराइएको गुनासो गरेका छन् ।भारतीय तरकारी तथा फलफुलको क्वारेन्टाइन परिक्षण गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको विषयमा उत्पन्न विवादलाई लिएर उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
मन्त्री यादव नेपाल चेम्बर अफ कमर्शद्वारा आयोजित वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विषयको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै थियो । उनले प्रमूक प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमाथि कटाक्षसमेत गरे ।
‘कांग्रेसले यतिञ्जेल सत्तामा बस्दा सँधै नागरिकलाई अर्गानिक खानेकुरा खुवाएको जस्तो व्यवहार देखायो,’ उनले भने, ‘विपक्षी हँु भन्दैमा जे पनि बोलिदिने ? यथार्थमा टेकेर बोलोस्, अनि मात्र कांग्रेसको इज्जत रहन्छ ।’
उनले अगाडि थपे, ‘इतिहासमा कांग्रेस भारतको सबैभन्दा ठूलो दलाल हो भन्ने आरोप हामीले पनि सुन्थ्यौं । व्यापारिक समस्या सरकारलाई भन्नुस, छलफल गरौं । संवाद नगरी हिँड्ने व्यवहार व्यापारीले देखााए । म त झन् लडेर आएको मान्छे, लड्न समस्या छैन ।’